Wildfire၊ Wildfire S နှင့် Desire အတွက် HTC သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်သည်။ | Androidsis
ဒံယေလ Ogando | | HTC က, လဲ tutorial
HTC က ထုတ်လုပ်သူအများအပြားကသော့ဖွင့်နေတာကိုတွေ့ရင်ဘက်ထရီတွေကိုချနေတယ် Bootlader ၎င်း၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွင်းအများအပြားစမတ်ဖုန်း၏။ ဒီဇင်ဘာလတွင်သူကသူတို့သော့ဖွင့်နိုင်သည့်သဟဇာတဖြစ်သောစမတ်ဖုန်းများစွာကိုကြေငြာခဲ့သည်။ သူကကျော်ကြားသော S-OFF သို့မဟုတ် bootloader unlock လုပ်ဆောင်ရန်သဟဇာတဖြစ်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းစာရင်းကိုတိုးချဲ့လိုက်သည်။
အဆိုပါစာရင်းနှင့်အတူစိုက်ပျိုးခဲ့သည် တောမီး, တောမီးနှင့် S Desire.
ကျွန်ုပ်၏ HTC Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။
ယနေ့ခေတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ Android တွင်သော့ဖွင့်ထားသော bootlader ရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာ HTC သည်ဤစနစ်ကိုပိတ်ဆို့သောအနည်းငယ်သောထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤတိုင်းတာမှုအသစ်ကြောင့်၊ သော့ဖွင့်ထားသော HTC အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးလုပ်နိုင်သည် ချက်ထားသော ROM များကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါရှိသည် root access ကို နှင့်အမြစ်တွယ်နေသောမိုဘိုင်းလိုအပ်သောတည်ရှိသည့်အပလီကေးရှင်းများစွာကိုနှစ်သက်သည် တိုက်တေနီယမ်အရံသိမ်းသို့မဟုတ် Autostarts ၎င်းတို့သည် Android အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Samsung ရဲ့ပုံစံနှင့်အတူတူပဲ galaxy S နောက်ဆုံးပေါ်ချက်ပြုတ်ထားသော ROM များကိုပျော်မွေ့ရန်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဂူဂဲလ်၏ဗားရှင်းကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်ခွင့်ပြုချက်အသစ်များကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းနှင့်အကွဲကွဲအပြားပြားငြင်းခုံဆွေးနွေးခြင်းများတွင်မပါဝင်ခြင်း၊ Ice Cream Sandwich.
ကျွန်ုပ်၏ HTC ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ။
ရိုးရှင်းသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်အမြစ်တွယ်နိုင်စေရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသော ROM ကိုတပ်ဆင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ HTC ကိုအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်စာမျက်နှာသို့သွားရပါမည် HTCdev, အဲဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့စာသားသေးသေးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်၊ သူတို့ကဖုန်းကိုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသူတို့မှာတာဝန်မရှိဘူးဆိုတာသတိပေးတယ်၊
ဖုန်းကဆင်းကတ်ကိုဆက်ပြီးသော့ခတ်ထားလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ထားသည့်တိုင်၎င်းသည်အခမဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အပိုင်း၌တည်၏ ထောကျပံ့ဖုန်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည် "စတင်ဖွင့်သော Bootlader" ပြီးတော့သူကပြdict္ဌာန်းမထားဘူးတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်ပါ၊ ကျွန်မတို့ရဲ့မိုဘိုင်းကိုလုံးလုံးသော့ဖွင့်ထားလိမ့်မယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Wildfire၊ Wildfire S နှင့် Desire အတွက် HTC သည် bootloader ကိုသော့ဖွင့်သည်။
Jose Angel FR ဟုသူကပြောသည်
အမြစ်ဖြစ်လာသည့်အခါဒေတာပျောက်သွားပါသလား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဆက်အသွယ်များ၊ sms များ၊ ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ အခန်းကိုပြောင်းတဲ့အခါသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမြစ်ဖြစ်လာတော့ငါမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jose Angel FR သို့ပြန်သွားပါ
ကျွန်ုပ်၏ HTC သည်ဆယ်လူလာကုမ္ပဏီအတွက်သော့ဖွင့်လျှင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်အမြစ်ဖြစ်ပါကမည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုသော့ဖွင့်ခြင်း၏မေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်အားမထိခိုက်ပါစေနှင့်။
ကျွန်ုပ်သည် Bootloader ကိုသော့ဖွင့်ပါကကျွန်ုပ်၏ HTC ကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် တွဲ၍ သုံးနိုင်သလား။
Sony Tablet P: ဆိုနီသည်ဒုတိယမြောက်တက်ဘလက်ကိုယူကေတွင်ဖြန့်ချိသည်
Runtastic Pro - မင်းရဲ့ Android မှာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်သူ